Ngemuva kwezinyanga ezimbili, u-Anelisa usalahlekile | Scrolla Izindaba
Ngemuva kwezinyanga ezimbili, u-Anelisa usalahlekile
Emamatheka ebusweni futhi egqoke umfaniswano wesikole, u-Anelisa Xhapha wavalelisa umndeni wakhe waya isikoleni.
Lokho kwenzeke ezinyangeni ezimbili ezedlule, kanti ingane eneminyaka eyi-16 ayikaze ibuye ekhaya.
Umndeni wakhe ovela eMzimkhulu, e-KZN, uthe amathemba abo okuthola u-Anelisa esaphila ayashabalala nsuku zonke.
“Kunzima kithina, ukungazi noma intombazane yethu ishonile noma iyaphila,” kusho umamncane wakhe uThembi Xhapha.
UThembi uchaze u-Anelisa njengengane ehloniphayo engakaze ilahleke.
“Uma sidla ukudla kwasebusuku, sifaka ipuleti lika-Anelisa, ngethemba lokuthi uzongena,” kusho uThembi.
Uthe ngenkathi eya esikoleni ngalolo suku, u-Anelisa wayesesimweni esivamile sokujabula, egqoke umfaniswano wakhe wesikole isiketi esimaroni nesikibha esiphuzi.
“Siyathandaza ukuthi abuyele ekhaya engalimele futhi ephila,” kusho umamncane wakhe.
uSayitsheni we-SAPS uPretty Maphumulo, umphenyi waleli cala, unxuse abanolwazi ukuthi bashayele i-Crime Stop ku-08600 10111.
Ngokwe-NGO Missing Children South Africa, ingane iduka njalo emahoreni amahlanu.
Le nhlangano ithe zingu-77% izingane ezidukile ezitholwe ziphila, kodwa ezinye ziyashushumbiswa noma zatholwa zishonile.
Lawa ngamanye amathiphu avela enhlanganweni uma ingane ilahleka:
• Zama ukungatatazeli.
• Ungalindi amahora angama-24 ukubika ukuthi ingane yakho elahlekile.
• Iya esiteshini samaphoyisa esiseduze uthathe isithombe sakamuva sengane.
• Nikeza incazelo enhle yokuthi ingane beyigqokeni, ukuthi uyigcine ikuphi futhi iluphi ulwazi olungasiza amaphoyisa.
• Qiniseka ukuthi amaphoyisa akunikeza inombolo eyinkomba kanye negama kanye nenombolo yokuxhumana yamaphoyisa i-SAPS anikezwe uphenyo.
• Khumbula ukuthi uma ingane yakho ibuyela ekhaya, kufanele ubike esiteshini samaphoyisa ukuthi ingane iphephile.